COPE welcomes Mugabe's resignation but says Zim is far from being free ⋆ Pindula News
COPE welcomes Mugabe’s resignation but says Zim is far from being free
South African opposition party, the Congress of the People (COPE) has welcomed Robert Mugabe’s resignation‚ saying it rejoices with the people of Zimbabwe. It however warned that Zimbabwe remains “far from Uhuru”.
Said COPE leader Mosiuoa Lekota:
There is an outstanding issue and that relates to the abuse of the human rights of citizens of Zimbabwe by Mugabe and his regime. This is a matter that only the people of Zimbabwe can deal with it within the dictates of their national constitution.
Lekota said that it was important for Zimbabwe to return to multi-party democracy‚ constitutionalism and to reignite the economy and deal with institutionalised corruption. He also said that people should learn from Mugabe’s rise and fall.
Tagged: Congress Of the People (COPE) Robert Mugabe
One Comment on “COPE welcomes Mugabe’s resignation but says Zim is far from being free”
ngavambotisiye tifare zvese izvo tichagadzirisa. i smell jelasing kkkkk
« Previous Chiwenga calls for order following Mugabe’s resignation
Next » How The International Media Covered Mugabe’s Resignation